Resaky ny mpitsimpona akotry : fampisehoana hery mety hiofo ho fandrika (NewsMada) | AEMW
Resaky ny mpitsimpona akotry : fampisehoana hery mety hiofo ho fandrika (NewsMada)
Be sandry didin’ny mpitandro filaminana pôlisim-pirenena manome tànana pôlisim-bohitra an’Antananarivo no manangan-tsandry misafo tanàna, vonona hampiasa hery handraofana ny entan’ireo mpivarotra amoron-dàlana madi-doha mitady hanohitra ny didy fandrarana ny fandraharahana an’arabe.
Fanadiovana ny renivohitra moa izany, hetsika mahafaly ny vahoaka. Fantatra anefa fa manohitohina ny hany asa ahafahan’ireo mpivarotra mikaroka fivelomana izao fandaminana izao. Andavanandro moa samy sorena daholo noho ny fibahanan-dàlana ataon’ny mpivarotra. Rehefa mitranga anefa ny fandroahana an’ireto farany, samy miseho mitsetra azy ireo ny maro, ary tsy mifehy vava maneho fanasoketana ny fomba fitondrana. Izao ve ny zava-maika hoy ny fanontanian’ny olona maro. Io hetsika io ve tsy fihatsaram-belatsihy fotsiny, fomba famafamafana fotsiny lelo mitsororika fa tsy fanasitranana ny fototr’aretina ? Fampiaingoana an’Iarivo eo ambony tsokoko amin’ny fiomanana fandraisam-bahiny rehefa mipaika ny fotoana fampiantranoana ny Fivoriana an-tampon’ny Fikambanamben’ireo firenena mampiasa teny frantsay, O.I.F.
Amin’izao fotoana izao nefa maro ny lonilony taizan’ny mponina. Tsy mangina any am-po intsony ny olona fa efa heno mingonongonona noho ny fasahiranana isan-karazany miavosa. Tselatr’afo kely fotsiny dia ahiana hampirehitra ny tanàna. Ny fitondrana no maivoka voalohany raha misy izany. Tsy misy mahafantatra mialoha moa hatraiza ny fiafarany rehefa raikitra ny korontana. Tsy aleo ve maodimaody ? Efa tongotra mby an-dàkana anefa noho ny fanekena efa natao mikasika ny fampiantranoana izany fivoriam-be izany. Tsy afa-mihemotra intsony, tsy maintsy miroso amin’ny fanaovana fihetsiketsehana. Tsy ela dia ho avy ny fandraofana ireo ankizy mirenireny an-dàlana sy ireo fianakaviana tsy manan-kialofana afa-tsy ny fanaovana tokotoko antsisin’arabe na eny an-jaridaina rehetra eny na any anaty tonelina mihitsy aza. Sanatria toy ny fako mahamenatra izy ireny, ilaina afenina tsy hanelingelina ny fijerin’ny vahiny. Hatoby an’efitra vetivety dia tsy ela ao aorianan’ny fahalasanan’ny vahiny dia hahazo fahalalahana hiriorio manerana ny arabe indray izy ireo, ho ravaky ny taham-pahantrana.
← us et coutumes : impasse mondiale (NewsMada)
Dans le cosmos (NewsMada) →